नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : गजल के हो ? कसरि लेखिन्छ ? गजल लेख्दा के के कुरामा ध्यान दिनु पर्छ?
गजल के हो ? कसरि लेखिन्छ ? गजल लेख्दा के के कुरामा ध्यान दिनु पर्छ?
साहित्यका अरु विधा जस्तै गजल पनि परापूर्व काल देखिनै चल्दै आएको विधा हो । गजलको उद्गम स्थल अरब भूमिलाई मानिन्छ । विशेषतः फारसी, उर्दू, हिन्दी हुँदै नेपालीमा आएको पाईन्छ । अरबी भाषामा ग को अर्थ वाणी ज को अर्थ नारी र अलको अर्थ को वा सँग हुन्छ । गजलको नामाकरण कसरी गरियो यसको एउटै उत्तर भेटिर्दन तर पनि अर्थ भने प्राय सबैले एकै किसिमका गरेका छन् । गजलको शाब्दिक अर्थ प्रेमिकासँगको कुराकानी,स्त्रीको वाणी, प्रेमिकाका विषयमा कुराकानी, प्रणयवार्ता, यौवना नारीको वर्णन गर्नु,प्रेमको भावना व्यक्त गर्नु आदि हुन्छ । फारसी भाषामा गजलको अर्थ नारीका कुरा हुन्छ । केही विद्धानहरुको तार्किक मान्यता गजल फारसी शब्द हो,जसको तात्पर्य प्रणय प्रधान गीत हो । वास्तवमा गजलको खास अर्थ नै प्रेम हो भन्ने तर्क
प्राय सबै विद्धानहरुले जिकिर गरेका छन् ।
नेपाली शब्दकोषका अनुसार प्रेमका विषयमा श्रृङ्गार रसका कविता लेखिने एक प्रकारको फारसी वा त्यसै छन्दमा लेखिएको कविता नै गजल हो । उर्दू र हिन्दी शब्दकोषले प्रेमिकासँग कुराकानी भन्ने अर्थ दिएका छन् । विद्धानहरुले आ–आफ्नै किसिमले गजलको परिभाषा दिएका भए पनि निष्कर्षमा गजल भनेको प्रेमलाई समेटेर निश्चित लय र तालमा लेखिने कविता हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । गजल बारे नेपालको सन्र्दभमा भन्नु पर्दा मोतिराम भट्टले विक्रम सम्वत् १९४० साल तिर भित्र्याएको भएता पनि त्यसलाई निरन्तरता दिने काम भने भिमनीधि तिवारी, आँसुकवि शम्भु प्रसाद ढुङ्गेल,उपेन्द्र बहादुर जिगरले निरन्तरता दिएका थिए । प्राथमिक काल र माध्यमिक कालतिर गजलले कुनै पनि नयाँ मोड दिन नसकेता पनि महत्वपूर्ण देन दिएको पाइन्छ । आज सम्म आईपुग्दा गजल हामी सबैमा भिजी सकेको विधा हो । तसर्थ नेपाली साहित्याकाशमा गजल विधाले राम्रै फट्को मार्न सफल रहेको छ ।
वास्तवमा गजल कस्तो हुनुपर्दछ यसमा विद्धानहरुको आ–आफ्नै मान्यता भए पनि साझा मान्यताका रुपमा निम्न कुराहरु अगाडि सारेका छन् । गजल संरचनाका हिसाबले प्राविधिक विधा हो भने भावका हिसाबले अत्यन्तै संवेदनशील विधा हो । गजलमा भाव र विम्बको जसरी अपेक्षा गरिन्छ, त्यससँगै शब्दगत सरलता, कोमलता, हार्दिकता, जीवन्तता, लयात्मकता र संप्रेषणीयता हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । श्रुतिकटु, अश्लिल, दुरुह, क्लिट, अभद्र, अपमान तथा अनादारवाची शब्दहरु गजलमा मान्य हुँदैन । गालीपनि मीठो शब्दले गर्न जान्नु पर्दछ । प्राविधिक विधा भएकै कारण संरचनामात्र यसको प्रमुख कुरा भने होईन । भाव, विम्ब र शिल्पमात्र पनि जरुरी होईन । गजलमा रहेका आन्तरिक संरचना र वाह्य संरचनामा सचेतता अत्यन्त आवश्यक कुरा हुन् । यिनीहरुको उचित समायोजनबाट मात्र सुन्दर गजल जन्मन सक्छ । गजलका विषयवस्तुका बारेमा जति चर्चा परिचर्चा भए पनि वाचन गरिने, छापिने र गाइने गजल फरक हुन सक्दैनन् । समग्रमा गजल एउटे किसिमका हुनु पदर्छ । गजल हुनलाई के के तत्वहरुको भूमिका रहेको हुन्छ त्यो जान्नु अति आवश्यक छ । गजल हुनलाई चाहिने मुलभुत तत्वहरु निम्न छन् ।
१. शेर :–
गजलमा शेर एक प्रमुख तत्व मानिन्छ गजल भन्नुनै शेरहरुको समष्टि रुप हो । एक शेरमा दुई पङ्क्ती हुन्छन् । शेरको पहिलो पङ्क्तीलाई मिसरा ए उला र दोश्रो पङ्क्ती मिसरा ए सानी भनिन्छ । शेरको एउटा मिसरा कम्तिमा पनि छ अक्षर हुनै पर्दछ । त्यसमा दुई रुक्न अनिवार्य मानिन्छ । सबै भन्दा सानो रुक्न तीन अक्षरको हुन्छ । हरेका शेरको मिसरा ए उलाले कुनै पनि विषय वस्तुको उठान गर्दछ र मिसरा ए सानीले त्यसलाई पुष्टि गर्नु पर्दछ । गजल प्रायः पाँच शेरका हुन्छन् तर चार देखि तेह्र शेर सम्म लेखिएका गजलहरु पनि यदाकदा पाईन्छन । विषय वस्तु प्रस्तुतीका दृष्टिले गजल मुलत दुई प्रकारका हुन्छन ।
क. मुसलसल गजल :–
एउटा गजलका सम्पूर्ण शेरहरुमा एउटै विषय वस्तुलाई प्रस्तुती गरेको भने त्यस्तो गजललाई मुसलसल गजल भनिन्छ । जस्तैः
किन दौडिएँ यति जोडले सपना कहाँ छुन सक्छु र ?
सपना यता, विपना उता भन रोज्ननै कुन सक्छु र ?
सपना छुने भनि दौडिँदा कुन मोडमा विपना छुट्यो,
सपना छुट्यो विपना छुट्यो अब के खुशी हुन सक्छु र ?
सपना कहाँ जिउँदै रह्यो जब भिडमाझ म एक्लिएँ,
सुख–दुःखको सपना थियो भनि सम्झँदै रुन सक्छु र ?
कति अल्झिएँ कति बल्झिएँ सपना र यो विपना भनि,
अब जिन्दगी नवमोडमा कसरी पु¥याउन सक्छु र ?
–सप्रेम अर्चना सपना कहाँ छुन सक्छु र ?
सप्रेम अर्चनाद्धारा रचित यो गजलमा चार शेर छन् र चारै शेर स्वतन्त्र एवंम् आफैमा पूर्ण छन् । तर सबै शेरहरुले समेटेका भावभूमी एउटै छ । तसर्थ यो गजल मुसलसल गजल हो ।
ख. गैरसलसल गजल :–
एउटा गजलका शेरहरुले विविध विषय वस्तुलाई समेटेका छन भने त्यस्तो गजललाई गैरमुसलसल गजल भनिन्छ । जस्तैः
मिले साट्न मेरो कहानी म साट्थे,
दिई यो बुढोपन् जवानी म साट्थे ।
कुनै शान्ति, सन्तोषको गाँउ पाए,
खुला भ्रष्ट यो राजधानी म साट्थे ।
मथी निस्किए स्वस्थ नौनी–विचार
पुरातन्य ठेकी, मदानी म साट्थे ।
म निस्सासिएको छु निष्पट्टतामा,
दिई रात नौलो विहानी म साट्थे ।
कतै स्निग्ध सौजन्य पाए रमाई,
अहंङ्कारको यो निशानी म साट्थे ।
विनाराग निद्र्धन्द्ध भै बाँच्न पाए,
कसैसँग यो जिन्दगानी म साट्थे ।।
गोविन्दराज विनोदीद्धारा रचित यो गजलका सबै शेरहरु पूर्ण भएर पनि प्रत्येक शेरहरुले भिन्ना भिन्नै विषय बस्तु बारे बोलेका छन् । तसर्थ यो गजल गैरमुसलसल गजल हो ।
२. काफिया :–
काफिया अरबी भाषाको पुलिङ्गी शब्द हो । यसको अर्थ बारम्बार आउनु भन्ने हुन्छ । यो गजलको अनिवार्य तत्व हो । काफिया बिना गजलको विधागत पहिचान हुन सक्दैन । यस अर्थमा गजलको विधागत पहिचानको एउटा महत्वपूर्ण तत्व पनि हो । तुक मिलेको शब्द,शब्दांश या अक्षर नै काफिया हो । यो रफिद भन्दा ठिक अगाडि आउँछ । शेरहरुमा काफियाको पुनरावृति नहुनु नै राम्रो मानिन्छ । काफिया बिना गजल बन्दैन तर काफिया मिल्दैमा पनि गजल हुँदैन । काफियामा स्वर मात्राको समानता हुनु पर्दछ । काफिया अनुप्रासयुक्त हुनु पर्दछ अथवा तुक नमिलेको शब्द,शब्दांश या अक्षरलाई काफिया बनाउनु हुँदैन । संरचनाका आधारमा काफियाहरु चार प्रकारका हुन्छन् ।
क. पूर्ण शब्द काफिया :–
सिङ्गा शब्द नै काफियाका रुपमा प्रयोग भएका छन भने त्यस्ता काफियालाई पूर्ण शब्द काफिया भनिन्छ । जस्तैः
१ गर्न, हर्न, तर्न, मर्न, छर्न, झर्न,
२ काम, माम, दाम, नाम, लाम, खाम
३ हुने, रुने, धुने, छुने
ख. आंशिक काफिया :–
शब्द भित्रको एक अंश मात्र काफियाका रुपमा प्रयोग भएको छ भने त्यस्ता काफियालाई आंशिक काफिया भनिन्छ । जस्तैः
१ पाएर, भेटेर, देखेर, लुटेर, फुकेर, ढाटेर
२ बताऊ, लडाऊ, उठाऊ, नचाऊ, पठाऊ
३ मायालु, दुधालु, बैशालु, कृपालु, खर्चालु, विषालु
ग. एकाक्षरी काफिया :–
एक अक्षरमात्र काफियाका रुपमा प्रयोग भएको छ भने त्यस्तो काफियालाई एकाक्षरी काफिया भनिन्छ । जस्तैः
१ यो, त्यो, हो, पो, को, भो
२ बिराई, मेटी, दुःखी, भनी, आई
३ लगाव, लाम, भाग, हिड, बस, खोज
घ. मिलित काफिया :–
समस्वरात्मक दुईवटा फरक शब्द वा तिनका अंश मिलेर बन्ने काफियालाई मिलित काफिया भनिन्छ । जस्तैः
१ जाग्छ, दाग छ, भाग्छ, माग छ, नाच्छ काग छ
२ पियो, सियो, नदी यो, कति यो, दियो, भरी यो
३ जगत, फगत, मन त, रगत, अब त
नोट :– स्वरुपका आधारमा काफियाहरु चार प्रकारका भए पनि प्रयोगका आधारमा भने पाँच प्रकारका हुन्छन् । एउटै गजलका शेरहरुका पूर्ण शब्द काफिया र शब्दांश काफिया मिश्रित रुपमा प्रयोग भएको छ भने यस्तो गजललाई मिश्रित काफियायुक्त गजल भनिन्छ । जस्तैः
१ सिरानी पानी, दानी, जवानी, कहानी, सानी
२ घर, खण्डहर, भर, नजर, कर, खबर, निर्झर
३ बताउँ, गाउँ, सुनाउँ, साउँ, ठाउँ आदि ।
३. रफिद :–
यो पनि अरबी शब्द हो । यसको अर्थ अनुगामी हुन्छ । मतलाका दुवै मिसरा र अन्य शेरहरुका मिसरा ए र सानीको अन्तमा प्रयोग हुने उही पद वा पदावलीलाई रफिद भनिन्छ । रफिद कम्तिमा एक शब्द देखि तीन शब्द सम्मको हुनु शास्त्रीय दृष्टिले उचित मानिन्छ । रफिद काफियाको ठिक पछाडि प्रयोग हुन्छ तर यो गजलको अनिवार्य तत्व भने मानिदैन । यसको प्रयोगले गजलको सौर्दय प्रशासनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने र गायनमा श्रुतिमधुरता समेत थपिने हुनाले अधिकांश गजलकारहरु यसलाई त्याग्न सक्दैनन् ।
रफिदको प्रयोगका आधारमा गजल दुई प्रकारका हुन्छनः
क. मुद्दरफ गजल :–
जुन गजलमा रफिदको प्रयोग भएको छ त्यो गजललाई मुद्दरफ गजल भनिन्छ । जस्तैः
हिजो आज मेरो आफ्नै रहर बिरानो भो,
बस्ति बसाउ भने यहाँ शहर बिरानो भो ।
माथि प्रस्तुत गजलमा बिरानो भो रफिदका रुपमा प्रयोग भएको छ ।
ख. गैरमुद्दरफ गजल :–
जुन गजलमा रफिदको प्रयोग भएको हुँदैन त्यस्तो गजललाई गैरमुद्दरफ गजल भनिन्छ । जस्तैः
विश्वासमाथि धोका हुँदा चोखो पिरतीमा,
श्रावण भदौ भा’छ मेरो मनको बलेसीमा ।
माथि प्रस्तुत गजलमा रफिदको प्रयोग भएको छैन ।
४. मतला :–
यो पनि अरबी शब्द हो । मतलाको अर्थ प्रारम्भ या सुरुवात भन्ने हुन्छ । गजलको पहिलो शेर वा पहिलो दुई हरफलाई मतला भनिन्छ । यसको दुबै मिसरामा काफिया र रफिदको प्रयोग हुन्छ । जस्तैः
सबै छन् सुतेका जगाए हुँदैन ?
तिमी फूल हौ मग्मगाए हुँदैन ?
५. मक्ता :–
यो पनि अरबी शब्द हो । मक्ताको अर्थ समापन अर्थात समाप्ति भन्ने हुन्छ । गजलका सन्दर्भमा मक्ता भन्नेबित्तिकै गजलको शेर समाप्ति शेर भन्ने बुझिन्छ । कतिपय गजलकारहरुले जुन शेरमा तखल्लुस प्रयोग भएको छ त्यसलाई मात्र मक्ता भनेको पाइए पनि मक्ता शब्दको अर्थ नै अन्त्य भएकोले तखल्लुस प्रयोग भए पनि नभए पनि गजलको अन्तिम शेरलाई मक्ता भनिन्छ । नेपालीमा यसलाई अन्तिम शेर पनि भनिन्छ । जस्तैः
साँची राख्नु चोखो सिउँदो मेरो प्रतिक्षामा,
हृदयमा तिम्रै माया भरी रा’छ नानीमाया ।।
–भानु शर्मा बिरही
६. तखल्लुस :–
जलमा प्रयोग गरिने श्रष्टाको छोटो नाम या उपनामलाई तखल्लुस भनिन्छ । गजलमा गजलकारले तखल्लुस प्रयोग गर्न पनि सक्छ नगर्न पनि सक्छ । तखल्लु प्रयोग भएको मक्ताको यो शेरः
सपनाहरु तुहाइए रिक्ततामा फर्के भने,
बिन्ती ‘किशमा’बाट टाढा हुन नखोज ।।
म भन्दै थिए हे हरी होस राखे,
नजरबाट ‘मोती’ पनि झर्न लागे ।।
माथि प्रस्तुत दुबै गजलका मक्ताको शेरमा ‘किशमा’ र ‘मोती’ तखल्लुसका रुपमा प्रयोग भएको छ ।
७. बहर :–
बहर गजलको सर्बोच्च अनसशासन हो । बहर भनेको छन्द हो । कुनै न कुनै छन्दमा बन्धित हुनु गजलको शास्त्रीय मान्यता हो । गजलमा प्रयोग हुने फारसी वा उर्दू शास्त्रीय लयलाई बहर भनिन्छ । अर्थात् गजलमा प्रयोग हुने लयविधान नै बहर हो । तर अक्षरको संख्या भने एउटै हुनु पर्दछ र नै सुन्दर लयको सिर्जना हुन्छ भन्ने केही विद्धानहरुको मान्यता छ भने कसै कसैले लय मिल्नु पर्छ मात्रा नै सबैथोक होईन भन्ने पनि गरेको पाईन्छ ।